Tom Howard - Hazie ọka iwu anyị na onye ọka iwu cannabis nwee usoro ọmụmụ gị
Ihe kpatara na Canlọ ọrụ Cannabis Gị Ji achọ Ezigbo Ọka
Kedu ihe kpatara marijuana ma ọ bụ ụlọ ọrụ hemp gị ji achọ onye ọka iwu cannabis?
Anya abuo n’ile anya n’onyinye gi nke n’enye uzo nleba anya nwere ike ime ka ulo oru ghari ogha n’iru. Iji maa atụ, Warren Buffett zutere onye ọka iwu aha ya Charlie Munger na 1959 ma nwee mmasị na echiche ya nke na o mere ka o kwenye ịhapụ omume nke iwu ma sonyere ya na Berkshire Hathaway. Ndị ọka iwu Cannabis nwere ma nwee ọrụ na ụlọ ọrụ ma nwee ihe ọmụma dị omimi banyere ihe ize ndụ ya na ọnọdụ ya nwere ike inyere azụmahịa gị aka irite uru asọmpi ma belata ihe egwu arụ ọrụ.
Anyị ga-ekpuchi uru ise dị mkpa dị mkpa nke enyere site na iwere ọrụ ọka iwu maka azụmaahịa cannabis ọhụrụ gị. Companieslọ ọrụ na-akpọkwa ndị ọka iwu iji nyere aka n'ịzụ ahịa ha na ụdị ihe niile. Ndị a bụ uru ise kachasị bara uru onye ọka iwu ụlọ ọrụ nwere ike iwetara ndị otu gị:
Ihe omuma banyere ngwa di omimi na usoro ikikere
Ingghọta Nrube isi na Iwu gọọmentị na nke Steeti
Ingghọta Nkwekọrịta Ndị Azụmaahịa maka Ọrụ
Ahụmahụ Mmepụta Ihe Ọmụma na Ihe Ọmụma
Ijikwa ihe ize ndụ ndị na-enyocha ndị azụmahịa Cannabis
Anyị ga-atụle uru ise a maka ịre onye ọka iwu cannabis ziri ezi maka azụmahịa gị.
Gwa a wii wii ma ọ bụ hemp ọka iwu banyere ahia cannabis gi.
Cannabis na-eto n’ike n’ike n’iji ya na-ewu ewu n’uwa niile. Ihe e chere na mbụ dị ka ihe taboo na-enweta ugbu a, ịbụ onye a ma ama, na nnweta na ọtụtụ steeti US na Washington, DC nwere nkwado, inweta, na iji wii wii iwu. Ọ bụ ezie na hemp bụ iwu zuru oke mgbe ewepụrụ ya site na Iwu Nchịkwa Fargwọ Ọrụ Ugbo 2018.
Dị ka anyị na-ekwu, ihe karịrị steeti iri atọ na atọ na US emeela ụfọdụ ụdị ịjuụ wii wii ka ọ bụrụ ihe ga-eme ka ọ bụrụ ezigbo ọgwụgwọ ọzọ enwere ike ịgwọ ọrịa.
Agbanyeghị na ọha na eze agbanweela echiche ha maka wii wii, bido ahịa cannabis ma na-aga nke ọma, ọ bụ nnukwu ọrụ na-atụle ọdịiche dị na iwu steeti na gọọmentị etiti.
Ọ bụrụ na ị bụ onye ọchụnta ego siri ike nke nwere ịnụ ọkụ n'obi ịbanye n'ahịa a na-eto eto, a na-atụ aro ka ị were onye ọka iwu ọkachamara cannabis. Ebumnuche bụ maka nke a bụ iji hụ na azụmahịa gị na-agbaso iwu niile dị na steeti gị.
Taa, anyị na-aga inyocha ụfọdụ abamuru nke iwere onye ọka iwu cannabis ma a bịa n'ịre cannabis, ma ọ bụ hemp, ọgwụ, ma ọ bụ wii wii.
1. Nchoputa di omimi & Ego di elu iji banye ulo oru Cannabis
Steeti ọ bụla nwere iwu dị iche iche na-ekpuchi oruru na ilekọta azụmaahịa wii wii. Ọtụtụ steeti etinyela iwu siri ike na ọnụ ọgụgụ azụmahịa cannabis nke enwere ike ịmalite n'oge enyere.
Ihe si na ya pụta bụ na steeti ụfọdụ na-enye ikikere n'oge mpio ngwa dị oke ọnụ na-akwụ nnukwu ụgwọ na nnukwu asọmpi maka ikikere ahụ.
Ọtụtụ mgbe, achọrọ ndị na-achọ akwụkwọ ka ha kwụọ ụgwọ ngwa ọrụ dị elu na ebumnuche ha iji nweta uru dị mkpa maka steeti ikikere.
Ihe omuma atu zuru oke bu Connecticut, nke n’egosi ihe nghazigharị $ 25,000 nye ndi choro inweta ikike inweta wii wii ha. N'iburu ego a dị elu n'uche, onye ọka iwu cannabis ga - enyere gị aka ịghọta otu esi emezu usoro iwu yana itinye ngwa iji wepụta oke ụgwọ nke ụgwọ ndị ahụ.
2. Ndị ọka iwu cannabis Ghọta Iwu Federal & State
Entrepreneursfọdụ ndị na-azụ ahịa cannabis nwere nghọta zuru oke gbasara iwu wii wii na steeti ha ma na-agba mbọ irube isi na ha. Agbanyeghị, n'ihi otu ihe ma ọ bụ abụọ, gọọmentị etiti ka nwere ike ileba azụmaahịa ha anya dị ka iwu na-akwadoghị ma wepu akwụkwọ ikike ha.
Onye ọka iwu pụrụ iche na-enyere gị aka ịghọta iwu gọọmentị etiti na nke steeti ka i wee nwee ike guzoro ohere kachasị mma maka ịchọpụta ihe ịga nke ọma ogologo oge na ụlọ ọrụ na-enye ọ .ụ.
Inwe onye ọka iwu cannabis bara uru na imezi mmalite mmalite gị. Eterchọpụta ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ịchọrọ inye bụ ihe dị mkpa ma ọ bụrụhaala ịmalite azụmahịa.
A na-ekewa azụmahịa Marijuana ụzọ atọ dị iche iche, otu ọ bụla na-egosikwa ụkpụrụ na ụkpụrụ dị iche iche.
Onye ọka iwu nwere ahụmahụ ga-enyere gị aka ịghọta otu ngalaba nke azụmaahịa wii wii gị dị. Egosiputa ụdị ahia wii wii di ka ndi a:
(i) Ugbo - a na-achịkwa ahịhịa wii wii nke ukwuu iji gosi na ngwaahịa dị elu, nke nchekwa na nke ọma. Na-eto eto wii wii chọrọ nnukwu ego na mbọ siri ike. Onye ọka iwu gị ga - enyere gị aka ibido azụmaahịa a iji hụ na ezuru oke ezumike.
(ii) Nmekorita - otutu ndi oru ahia na-ewulite ndi ulo oru na adighi ire ahia acho acresctures. A na-ahụkarị bandwagon a dị ịtụnanya site n'ọmụmụ sayensị na-abawanye ụba na-ekwu na uru bara ụba dị na marijuana na-agwọ ọrịa. Emebela iwu dị iche iche na steeti dị iche iche iji chịkwaa ihe ndị ahụ, na-edenye aha na ntuziaka maka ozi ndị kwesịrị ekwesị.
(iii) Mzụta - Azụmaahịa Marijuana nke edepụtara n'okpuru ụdị nke ụlọ ahịa na-enye ntụrụndụ yana ọgwụ. Dị ka a na -eme, mkpokọta ndị a na-eresị ndị mmadụ ikike yana ndị ọrịa gbagoro afọ 21. Ego mbido maka ịtọlite ​​ụlọ ahịa na-ere ahịa bụ ihe kachasị ọnụ, mana ha na-ewetakarị uru dị mkpa karịa ụdị azụmahịa wii wii ndị ọzọ.
3. Ndị ọka iwu Cannabis ghọtara nnabata
Onye ọka iwu nke na-ekwukarị okwu na ma iwu gọọmentị nke gọọmentị etiti yana nke steeti ga - enyere gị aka ịchọpụta ọnọdụ ndị akọwapụtara otu a. azụmaahịa wii wii gị. Ghọta ihe achọrọ maka ngwa, ịnye ikike na azụmaahịa azụmahịa cannabis bụ akụkụ dị mkpa maka iwulite ma kwadokwa ụlọ ọrụ wii wii ziri ezi.
Marifọdụ marijuana ma ọ bụ ndị ọchụnta ego hemp na-anwa ịnyagharị na teknụzụ ndị a ma mebie ego ha.
Usoro itinye n'ọrụ maka ikikere azụmaahịa yana ịchọ ego nwere ike ịdị iche iche dabere na ebe obibi gị. Akwụghị ụgwọ ngwa ngwa na mpaghara ụfọdụ ma na-efu ọtụtụ puku dollar n'enweghi nkwa nkwenye. Ductme ezigbo nyocha nwere ike ịdị mkpa n'ọnọdụ ụfọdụ iji wepu ndị omekome amamikpe bụ ndị akụkọ ha metụtara ime ihe ike ma ọ bụ mmejọ metụtara ọgwụ.
Ọzọkwa, ọtụtụ steeti nwere iwu na -ebelata ọnụahịa azụmahịa marijuana enwere ike ịtọlite ​​mpaghara enyere. Nke a emeela ka ego bulie oke ma bulie asọmpi. Steeti ndị ọzọ na-agakwa n’ihu ịchọ gbasara akụ na ụba gị iji chọpụta ma ị nwere akụnụba ego iji kpoo mmefu ndị dị ka ụgwọ ụlọ na ọrụ.
Dịka ọmụmaatụ, na Illinois, steeti nwere ike ịchọ ụlọ ahịa azụmaahịa achọrọ ka ha nwee ego ha na-erughị ọkara nde dollar iji melite ma na-azụ ahịa ahụ. Steeti nwekwara ike ịchọ ihu usoro nchekwa dị ukwuu nke onye ọchụnta ego ahụ ji rụọ ọrụ iji hụ na wii wii nke mepụtara maka ebumnuche ọgwụ anaghị ejedebe n'ahịa ojii - ma ọ bụ na mberede ma ọ bụ kpachara anya.
Ewezuga iwu steeti, gọọmentị obodo na obodo nwere ike ịnwe otu ụzọ ha ga-esi na-emezi ahịa wii wii. Governmentsfọdụ gọọmentị ime obodo na-eme nyocha azụ maka ndị nwere azụmaahịa wii wii na ndị ọrụ ha dịka ihe dị mkpa iji tinye akwụkwọ ikike.
N'iburu n'uche ego ndị a dị elu, iwere onye ọka iwu cannabis iji nyere gị aka ịgagharị nkọwa nkọwa ndị a yiri ka ọ ga - abụ echiche kachasị mma tupu ịga n'ihu. Emezughi ihe a choro nwere ike ibute ntaramahuhu, nwepu ikike ikike, ma nwe mmebi iwu nke ntaramahuhu ndi ozo.
4. Gettingnweta azụmaahịa azụmahịa Cannabis
Startmalite na ịnọgide na-enwe azụmaahịa cannabis nwere ike bụrụ ihe na-achọsi ike. Na agbanyeghi ihe mgbochi ndi kwesiri ekwenyeghi dika nzipu ego, ahia, mmekorita nke ndi ahia, na uto, azumahia a gha aghaghi idebe iwu na ukpuru nile ma obu ihu njikere inweta nsogbu. Site na iji ọka iwu cannabis ziri ezi n'akụkụ gị, enwere ike idobe azụmahịa gị na ntọala ziri ezi iji hụ na uto na mgbasawanye n'ọdịnihu.
Ezigbo ọka iwu cannabis ga-enyere gị aka n'ịzụlite azụmahịa & arụ ọrụ cannabis, ikike mpaghara na ikike, yana nnabata na ikikere mpaghara & steeti.
Enweghị onye ọka iwu, ọ dị mfe ịchọta onwe gị ka ị na-agagharị n'okporo ụzọ dị larịị n'aghọtaghị ya n'ihi ọdịdị iwu nke na-agbanwe azụmahịa wii wii. Ọtụtụ ebubo mpụ nwere ike ịdakwasị gị na azụmaahịa wii wii gụnyere oge enwere ike ịnọ n'ụlọ mkpọrọ, iyi egwu mmechi azụmahịa, yana oke oke na ụgwọ ndị ọzọ.
Onye ọka iwu cannabis ziri ezi ga-echebe gị naanị maka ebubo ndị a kama chebe aha ọma nke azụmahịa gị. Azụmaahịa ọ bụla kwesịrị ịrụ ọrụ n'ime oke nke iwu ahụ ka ụlọ ọrụ ahụ wee na-arụ ọrụ. Na njedebe, azụmahịa gị kwesịrị ka arụ ọrụ nke ọma na-enweghị mgbakwụnye mgbakwunye nke idozi nsogbu gbasara iwu.
5. Limkwụsịtụ Egwu Mgbapụta Ma ọ bụ Hemp
Ijikwa onye ọka iwu cannabis bụ nnukwu ụzọ iji belata ihe egwu gị nwere ike inwe. N'aka nke ọzọ, wii wii ka bụ ihe iwu na-akwadoghị n'okpuru iwu gọọmentị, ọ nweghị onye ọ bụla sọpụrụ maka steeti ndị akwadoro iwu ya maka ebumnuche ọgwụ ma ọ bụ maka ntụrụndụ. N'aka nke ọzọ, ndị azụmaahịa ha na-agbaso iwu steeti n'ozuzu ha enweghị ihe ọ bụla nke njide ma ọ bụ ikpe nke ndị gọọmentị etiti.
N’ihi nke a, a na-adụ ndị ahịa azụmahịa wii wii niile ka ọ na-agbasochi iwu steeti ha anya na -eme ka ohere hapụ n ’ụlọ ikpe mpụ yana ọghọm ọ ga-esi mụta itinye ego. Gọọmentị etiti na-achọ mgbe niile maka azụmahịa na-anaghị echebe n'okpuru iwu wii wii nke steeti maka ịba mba.
Ọ na-elekwasị anya na ikpe ndị metụtara ụdị mpụ ndị dị ka ikesa wii wii site na netwọ mpụ ahaziri ịkwọ ụgbọala, ịnya ụgbọ ala, ikesa wii wii na ihe omume ndị ọzọ na-ezighi ezi ịnwe ọgwụ ahụ.
Site na onye ọka iwu ọkachamara nwere ikike ịnọ n'ụgbọ ahụ, inwere ike ijide n'aka na azụlitere azụmahịa gị n'ụzọ nke ga --belata ihe egwu dị na mpụ gọọmentị etiti.
Onye ọka iwu ga-enwe ike ịhazi azụmahịa gị n'usoro iwu obodo niile iji gbochie iwepụ akwụkwọ ikike azụmaahịa na ego ndị so ya. Ọzọkwa, onye ọka iwu cannabis ga-enwe ike idobe azụmahịa gị yana oge niile site na nyochaa nyocha nke iwu na mgbanwe na usoro iwu.
Na azụmaahịa wii wii, otu ọghọm ga-eduga gị n'ụlọ ikpe gọọmentị ma belata ego gị. Otu n'ime njehie ndị dị otú ahụ gụnyere ịnwe ndị were n'ọrụ. Ọ bụrụ na i bu n’obi iwere ndị ọrụ ọhụrụ, onye ọka iwu cannabis ga - enyere gị aka n’iwu na ụgwọ mkpuchi.
Echiche nke ikpeazụ na ndị ọka iwu Cannabis
Ulo oru itumgbere ahia na nkpuru igbo ma obu ire wii wii nwere nnukwu nsogbu. Maka nke ahụ, ọ bụ maka ọdịmma gị kachasị mma ịtụle iwere n'ọrụ ọka iwu cannabis maka azụmahịa gị.
Onye ọka iwu cannabis bụghị naanị na-enyere aka ịghazi ihe egwu dị na azụmaahịa marijuana kamakwa na-agba mbọ na mpempe akwụkwọ azụmahịa yana akwụkwọ ikike.
N'inye ọnụego mbido mbụ, ịdị mgbagwoju anya nke iwu ndị metụtara yana ihe egwu dị na mkpesa gọọmentị, onye ọka iwu na-ada ụda dị ka ego nwere ezi uche. Trygbalị ịkọwa iwu cannabis n'onwe gị nwere ike imebi ihe na-agbagha.